Ụlọ - Utter Technology
Akụkọ ihe nkiri
kpam kpam Technology
UtterTechnology bụ otu n'ime blọọgụ kacha mma maka nkuzi ndụmọdụ na aghụghọ efu gbasara teknụzụ dịka igwe ojii, egwuregwu, ekwentị mkpanaaka, IoT, ahịa dijitalụ na ọtụtụ edemede ndị ọzọ. M ga-aga n'ihu na-agbakwunye edemede ndị ọzọ ka ọ dị mkpa. Isiokwu ndị a nwere ike inye aka dị ukwuu maka ndụ gị kwa ụbọchị nke na-agbagharị na teknụzụ ugbu a. Nọrọ na-ege ntị na blọgụ a maka mmelite ndị ọzọ.
Okwu nke taa #337 Ndụmọdụ na Azịza
Nwere ike 21, 2022 Nwere ike 21, 2022
Wordle ewerela ụwa n'ike, ma ọ bụrụgodi na ị naghị egwuri egwu kwa ụbọchị, ị hụla ogige ndị na-enweghị atụ na mgbasa ozi ọha. Tupu ikpughe ihe ngwọta,…
Okwu nke taa #336 Ndụmọdụ na Azịza
Nwere ike 20, 2022 Nwere ike 21, 2022
Okwu nke taa #335 Ndụmọdụ na Azịza
Nwere ike 19, 2022 Nwere ike 19, 2022
Okwu nke taa #334 Ndụmọdụ na Azịza
Okwu nke taa #333 Ndụmọdụ na Azịza
Nwere ike 17, 2022 Nwere ike 17, 2022
Okwu nke taa #332 Ndụmọdụ na Azịza
Nwere ike 16, 2022 Nwere ike 16, 2022
Okwu nke taa #331 Ndụmọdụ na Azịza
Nwere ike 15, 2022 Nwere ike 15, 2022
Otu esi eji Amazon Echo gee ntị na pọdkastị Apple
Amazon Echo nwere ike ịbụ ebe ntụrụndụ niile dị n'ụlọ gị. Nke a gụnyere ịge ntị pọdkastị, egwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-akpọ ụda na TV Fire gị.
Ikike na akụkọ ihe mere eme: Apex Legends Mobile Fade
Ignacio Huaman, onye mbụ n'ime ọtụtụ Apex Legends Mobile-First Legends, Fade. Ruo mgbe agbakwunyere ya na isi usoro Legends Apex, Fade ga-adị naanị na Apex Legends…
kredit efu na koodu agha Tycoon maka Mee 2022
Ị chọrọ kredit efu na Military Tycoon Roblox? N'ime edemede a anyị na-enye koodu agha Tycoon maka Mee 2022 iji nweta kredit efu. Ị nwere ike ugbu a iji ọtụtụ…
Koodu Pet Simulator X (Mee 2022): diamond efu, nkwalite mkpụrụ ego na gingerbread
Chọta koodu mgbapụta niile maka egwuregwu Roblox mara mma na nke na-atọ ụtọ Pet Simulator X iji nweta diamond n'efu, nkwalite mkpụrụ ego na ihe ndị ọzọ. Ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na…
Koodu Roblox Project Ghoul (Mee 2022) - Ntugharị efu na nkwalite
Koodu Roblox Project Ghoul nwere ike inyere gị aka inweta XP ngwa ngwa site na ịnye gị spins efu, nkwalite na ihe ndị ọzọ na egwuregwu ahụ. Na Project Ghoul, ị nwere ike họrọ ịbụ…
Okwu nke taa #327 Ndụmọdụ na Azịza
Nwere ike 11, 2022 Nwere ike 15, 2022
Wordle ewerela ụwa n'ike, ma ọ bụrụgodi na ị naghị egwuri egwu kwa ụbọchị, ị hụla ogige ndị na-enweghị atụ na mgbasa ozi ọha. Wordle ewerela…
Okwu nke taa #324 Ndụmọdụ na Azịza
Nwere ike 9, 2022 Nwere ike 15, 2022
Ụzọ 7 iji dozie egwu Instagram anaghị arụ ọrụ
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, ọtụtụ ndị mmadụ achọpụtala na mgbe ụfọdụ ha enweghị ike itinye egwu na Instagram. Karịsịa, ihe mmado egwu na Akụkọ Instagram arụbeghị ọrụ…
Otu esi ese foto zuru ezu ibe weebụ na iPhone ma ọ bụ iPad
Apple's iOS nwere ihe arụnyere n'ime ya na-enye gị ohere ịse nseta ihuenyo. Njirimara a na-enyekwa gị ohere ijide ibe weebụ na iPhone ma ọ bụ iPad gị, nke ị nwere ike chekwaa ...
Otu esi egwu Roblox na Nintendo Switch
Roblox bụ ikpo okwu egwuregwu ịntanetị na-ewu ewu nke na-ahapụ ndị mmadụ ịme egwuregwu nke ha nke onye ọ bụla nwere ike igwu. Ọtụtụ nde mmadụ na-egwu egwuregwu dị ukwuu n'elu ikpo okwu,…
Otu esi eme ka ọnọdụ gbara ọchịchịrị na ngwa mkpanaaka Wikipedia ma ọ bụ webụsaịtị
Ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ịnweta Wikipedia na ọnọdụ gbara ọchịchịrị. Ọ bụrụ na ị na-eji Wikipedia ọtụtụ ihe, ọ ga-abụ na agba ọcha na saịtị ahụ n'uche gị. E mere saịtị ahụ ka ọ dị mfe na ebumnuche.
Zelle adịghị mma iziga na ịnata ego n'aka ndị tụkwasịrị obi
Ị nwere ike iziga onye ị maara ma tụkwasara obi site na iji Zelle ego. Zelle sonyeere ọrụ dị ka PayPal na Venmo na 2017 dị ka ụzọ dị mfe iji zipu na nweta ego na ekwentị gị.
Otu esi ebupu ndetu na ihe ederede dabere na Facebook
Facebook mere ngwá ọrụ nke mere ka ọ dịkwuo mfe karịa mgbe ọ bụla ndị mmadụ ịhapụ netwọk mmekọrịta na-enweghị ihichapụ ọdịnaya ha kpamkpam.
Ị nwere nsogbu na ngwa Amazon? Ụzọ 7 iji dozie nsogbu
Nwere ike 13, 2022 Nwere ike 13, 2022
Site na ngwa Amazon, ị nwere ike ịzụ ahịa na ịchọgharị, tinye iwu n'ịntanetị, lelee ọkwa nke usoro, na ọbụna nweta mbelata na ụlọ ahịa Amazon nwere dị ka Whole Foods. Mgbe ole…
Otu esi echekwa ntụzịaka Google Maps na ekwentị gị ka i wee jiri ya na-anọghị n'ịntanetị mgbe ị na-anya ụgbọ ala
Nwere ike 12, 2022 Nwere ike 12, 2022
Jiri Google Maps na-enweghị njikọ Ịntanetị site na nbudata ntụziaka. Mgbe ị nọ n'etiti ebe ọ bụla na-enweghị ohere ịntanetị, Google Maps bụ onye na-azọpụta ndụ. Nke a…
© 2022 Utter Technology • Wuru na GeneratePress